Muraayadaha wax akhriska ee ragga
Muraayadaha akhriska dumarka
muraayadaha xannibaya iftiinka buluuga ah
Ragga muraayadaha iftiinka buluuga ah ee xannibaya
Dumarka muraayadaha buluuga ah ee xannibaya iftiinka
Iftiin buluug ah
Muraayadaha xafladda dadka waaweyn
Muraayadaha xafladda carruurta
Shahaadooyinka & Xisaabinta Warshada
Iibinta ugu Fiican
Sidee loo doortaa muraayadaha qorraxda saxda ah?
1) Dhammaan muraayadaha qoraxda waa anti-ultraviolet. Ookiyaalaha qoraxda oo dhami maaha kuwa ka hortaga ultraviolet. Haddii aad xidhato muraayadaha qorraxda ee aan ka-hortagga ultraviolet-ka, muraayaduhu aad bay mugdi u yihiin. Si aad wax u aragto, ardaydu si dabiici ah ayey u weynaan doonaan, fallaadho badan oo ultraviolet ah ayaa soo galaya indhaha, indhuhuna waxay noqon doonaan ...
Talooyin ku saabsan isticmaalka muraayadaha qorraxda
1) Xaaladaha caadiga ah, 8-40% iftiinka ayaa geli kara muraayadaha qorraxda. Dadka intooda badan waxay doortaan 15-25% muraayadaha indhaha. Dibadda, inta badan muraayadaha midabka beddela ayaa ku jira xadkan, laakiin gudbinta iftiinka muraayadaha ee soo saarayaasha kala duwan ayaa ka duwan. Muraayadaha midabka madow ayaa soo geli kara...
Aqoonta muraayadaha muraayadaha
1. Waa maxay noocyada qalabka muraayadaha ee jira? Qalabka dabiiciga ah: dhagax crystal ah, qallafsanaan sare, ma fududa in la shiidi karo, waxay gudbin karaan fallaadhaha ultraviolet, waxayna leeyihiin birefringence. Qalabka macmalka ah: oo ay ku jiraan galaas aan organic ahayn, galaas organic iyo resin indhaha. Muraayadaha aan organic: Waxa laga dhalaaliyaa silica, calciu...
1. Lens: waa qayb ku xidhan giraanta hore ee muraayadaha, waa qayb ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan muraayadaha. 2. Buundada sanka: isku xirka bidix iyo midig qalabka indhaha u eg. 3. Xirmooyinka sanka: taageer marka la xidho. 4. Madaxa dusinta: Isku-xidhka u dhexeeya giraanta muraayada iyo xagasha muraayada waa genera...
Faham la'aanta xulashada muraayadaha qorraxda.
Faham la'aanta 1: Dhammaan muraayadaha qorraxdu waxay 100% u adkaystaan ​​UV Aynu marka hore fahanno iftiinka ultraviolet. Dhererka hirarka iftiinka ultraviolet wuxuu ka hooseeyaa 400 uv. Ka dib marka ay ishu soo baxdo, waxa ay dhaawici doontaa lafaha cornea iyo retina.
Sannad kasta waxaanu ka qayb galnaa bandhigga indhaha ee Tokyo, waxaanu ku guuleysanay abaalmarino badan, waxaanu leenahay taariikh dheer oo ku saabsan dhinaca wax soo saarka muraayadaha, wuxuu leeyahay waayo-aragnimo qani ah, oo leh qaar badan oo ka mid ah warshadaha kiis xirfadeed iyo wadashaqeyn la leh noocyo badan oo caan ah, muraayadahayada naqshadeynta quruxda badan, ...
Warshadaha "Muraayada" waxay ilaashadaan ujeedadooda asalka ah waxayna had iyo jeer raacaan xisbiga
Golaha Joogtada ah ee 9-aad ee Ururka Isgaadhsiinta ee Shiinaha iyo Kulanka Isweydaarsiga Khibrada Shaqada ee Dhismaha Xisbiga ayaa la qabtay 26-kii Maajo, Golaha Joogtada ee Sagaalaad ee Ururka Indhaha Shiinaha ayaa lagu qabtay Changsha, Hunan. In ka badan 100 qof ayaa ka soo qeyb galay kulanka,...
Hormoodka muraayadaha duuliyaha
Muraayadaha qoraxda ee Aviator 1936 Waxaa soo saaray Bausch & Lomb, oo lagu suntay Ray-Ban Sida dhowr naqshadood oo caan ah, sida Jeep, Aviator muraayadaha ayaa markii hore loogu talagalay isticmaalka militariga waxaana loo sameeyay 1936 duuliyeyaasha si ay u ilaaliyaan indhahooda marka ay duulayaan. Ray-Ban wuxuu bilaabay inuu muraayadaha ka iibiyo...
Beerta Warshadaha ee Fenxi, Magaalada Duqiao, Taizhou, Zhejiang, Shiinaha
Muraayadaha Weyn ee Weyn, Muraayadaha Weyn ee Isha Keliya, Muraayadaha Xisbiga, Muraayadaha Xisbiga ee Shakhsi ahaaneed, Muraayadaha Iftiinka Weyneeya, Muraayadaha Qorraxda ee La Weyn,